Iko Kambani Kwekambani Yakagadzwa - Kuvaka Bhizinesi Kiredhiti
Nhungamiro yakazara pachikwereti chekambani, kusimbisa bhizinesi rechikwereti uye kuwana mitsara yechikwereti kubva kune vanopa. Kuvaka bhizinesi kiredhiti hakusi nyore kuzviita wega, asi nerubatsiro diki iwe unogona kuve nekambani kiredhiti nekukurumidza kupfuura iwe zvawaifunga. Kune zvinhu zvinoverengeka zvekudzivirira pamwe nezvimwe zvinhu zvakakosha izvo zvisingakwanise kufuratirwa. Tinokutora iwe neruoko uye tinokutungamira nenzira iyi yakaoma.
Kugadzirira iyo Corporate Chikwereti Kuvaka Maitiro
Isu tinonyora maitiro ekumisikidza bhizinesi rechikwereti, nzira yese kuenda kune yakavhurika chikwereti chebhangi, akawanda ebhizinesi kiredhiti kadhi uye akati wandei echikwereti nevatengesi. Izvi zvese zvinotanga nekuisa hwaro hwekugadzira yako mbiri yechikwereti uye maitiro ekunyorera nevanokweretesa, uchiita kushingairira kwako kwakakodzera. Iwe unofanirwa kuona kuti bhizinesi rako rakagadzirira kuita kwekuvaka chikwereti - kana ukatanga usingaite mabasa aya, unozvipinza mungozi yekutangazve kana kutonyanya, kupeputswa nekumakwa yakaipa kiredhiti / njodzi huru nemasangano anozivisa. Izvo zvakakosha kuti unzwisise uye upedzise aya matanho ekuvaka yako bhizinesi 'kiredhiti profile.
Nhanho 1 - Chikwereti Zita Kutsvaga naDunn naBradstreet
Nekutsvaga D&B mazita emabhizinesi, unogona kukurumidza kuona kana bhizinesi rine zita rimwe chete riine nhoroondo yechikwereti. Nekushandisa iyo yekumberi yekutsvaga, iwe unogona kubvunza iyo D&B dhatabhesi padanho renyika. Nei kutsvaga Dunn naBradstreet kwakakosha? Kana iwe waizopedzisa bhizinesi rekuvaka chikwereti maitiro uye wozoona kuti kambani ine zita rimwe chete (pamwe mune imwe nyika) yaive nehuremu hwechikwereti nehurombo kana yakanyanya njodzi nhoroondo yechikwereti, unogona kuzviwana uchifanira kukunda izvo kana wako zita rekambani rinotsvaga.
D&B Bhizinesi Rezita Rekutsvaga
Paunenge iwe uchinge wasimbisa kuti rako bhizinesi zita rakasarudzika neD&B, unogona kuenderera pamwe neyechikwereti chimiro kuvaka maitiro. Kana iwe ukawana kambani ine zita rimwe chete, iwe unogona kufunga kugadzirisa ako rekodhi rekodhi kuitira kuti uvake chikwereti pasi pezita rebato risati ratove kushandiswa.
Nhanho 2 - Bhizimusi Zita Kuwanikwa Kutsvaga
Nhanho inotevera ndeyekutarisa zita rako rebazi kutarisana nezvose zvakanyoreswa murudzi. Unogona kuita izvi nekuenda kune wega wega Munyori kana Commission hofisi, webhusaiti kana kufona nzvimbo uye tarisa kuwanikwa kwezita, kana iwe unogona kushandisa chishandiso chepamhepo. Kune maturusi ekutsvaga anowanikwa kuchikwereti uye marekodhi emari pamwe nezvakanyoreswa zvebhizinesi. Uku kutsvaga kuri nyore kuchakuzivisa iwe kana paine rimwe bhizinesi rakanyoreswa bhizinesi rinoshandisa zita rimwe chete kune imwe nyika.
Kutsvaga kunofanirwa kuitiswa pasina kodhi yekuzivisa, zvichireva zita rekuti bhizinesi risina "Inc", "LLC", "limited", "Corp", nezvimwe. Nekutsvaga uku, iwe uchawana kambani yako yakanyorwa uye unogona kuona yeruzhinji rekodhi ruzivo, senge pakaumbwa sangano, mhando uye akanyoreswa echinzvimbo kero.
Nhanho 3 - Chiratidzo chekutyora Kutarisa
Iwe zvakare uchazoda kutarisa Trademark Electronic Tsvaga System (TESS) dhatabhesi kuti ienzane nemutambo wezita rako rechinhu. Iyi mhando yemubvunzo inowanzo kuratidza yakawanda mhedzisiro. Izvo zvaunopinda mufomu zvakapatsanurwa uye zvakatemerwa mutambo wakafara. Semuenzaniso, kana iwe ukatsvaga "Bhizinesi Kiredhiti", iwe uchaona mhedzisiro se "CU BIZSOURCE" iyo isina 'bhizinesi kiredhiti' muzita kana rondedzero yezvinhu nemasevhisi, zvisinei 'bhizinesi' uye 'chikwereti' zviri, izvo zvinounza mhedzisiro, kunyangwe pasina chaiwo mutambo.
Chiratidzo cheMagetsi Ekutsvaga Sisitimu (TESS)
Zviratidzo zvekutengesa zvichanyoreswa uye zvingave ZVINOGONESESA kana zvakafa, mune ino kesi, iwe unoda kutarisa zviripo zviratidzo zvekutengesa zvine chaiyo mutambo wezita rako rebhizinesi kuitira kuti uone kuti hapana kunetsana. Kumwe kufungisisa ndekwekuti zvikwangwani zvakapihwa zvikamu, kuti ugone kuve neshoko rezwi rakanyoreswa kune yako indasitiri kana chikamu uye chimwe chikamu chinogona kunyoresa zvakafanana izwi rinoteedzana mune chimwe chikamu kune zvimwe zvinangwa.
Nhanho 4 - Domain Name Kutsvaga, Webhusaiti Kero
Iwe unofanirwa kunyoresa zita rekambani yako sedomain, kunyanya iine ".com" yekuwedzera. Tarisa chero dhairekitori rezvesaiti kuti uwane zita rezita. Yako zita renzvimbo rinogona kana kusasanganisira yako yekodhi chitupa. Zvichireva kuti kana zita rekambani yako riri "Akanakisa maProjeki Mamaneja, Corp" iwe waizotsvaga kunyoresa "www.bestprojectmanagerscorp.com" kana neimwe nzira "www.bestprojectmanagers.com" nekuda kwechinangwa ichi.
Register.com Domain Kuwanikwa Kuongorora
Iri harifanirwe kunge riri iro rekutanga zita rezita rinoshandiswa nekambani yako kubhizinesi. Kutevedzera muenzaniso uri pamusoro, unogona kunge uri kushandisa rimwe zita rezita, zvisinei kuti zvakakosha kuti zita rauri kuzovaka chikwereti pasi rakanyoreswa kwauri.
Nhanho 5 - Superpages Directory Chinyorwa
Ita shuwa kuti une bhizinesi rezvinyorwa mune Superpages bhizinesi dhairekitori. Ukasadaro, unogona kugadzira imwe yemahara. Izvi zvinotora maminetsi mashoma uye hazvibhadhare chero chinhu. Iwe unogona kugadzira account uye wedzera bhizinesi rako kudhairekitori nekutevera iyi link iripazasi. Kana iwe ukawana bhizinesi rako, tarisa kuti uve nechokwadi chekuti ruzivo rwakagadziridzwa neako azvino ekubata uye nzvimbo yenzvimbo.
Superpages Bhizinesi Dhairekisheni Rondedzero
Pane zvakawanda zvingasarudzwa kuti bhizinesi rako rinyorwe, nekuda kwechinangwa ichi, kungova uine rako bhizinesi zita mune dhairekitori nerako ruzivo rwekufonera zvino zvakakwana.
Zita Rokugadzirisa Solution
Kana zita rako remubatanidzwa richipesana nechero cheki chepamusoro, iwe unofanirwa kufunga kuchichinja. Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvaunogona kuwana, kubva kuDBA's, zvinyorwa zvekugadzirisa uye kufaira bhizinesi nyowani. Unogona kufona 1-800-Kambani uye ndokumbira mubatsiri wekutengesa kuti akubatsire nezita idzva rebato. Usati wapedzisa zita rebhizinesi shanduko kana kunyoresa bhizinesi nyowani, iwe unofanirwa kupedzisa nhanho dziri pamusoro kuti uve nechokwadi chekuti iwe unokwanisa kuvaka zvakachengeteka bhizinesi rezvikwereti nayo.
Enderera kuNhanho Inotevera mu >> Kuvaka Kiredhiti Kiredhiti - Kukurukura Bhizinesi Bhizinesi Mhando >>